GFG စီးရီးမြင့်စွမ်းရည်အရည်အိပ်ရာခြောက်စက် - တရုတ် Changzhou Dame ဆေးဝါးပစ္စည်းကိရိယာ
WLDH Horizontal ဖဲကြိုးရောနှော
EYH စီးရီးနှစ်ဦး Dimensional ရောနှော
DSH စီးရီးကိုနှစ်ချက်ဝက်အူ Cone ရောနှော
FL အရည်အိပ်ရာ granules
ဒါဟာလေထုသန့်နှင့်အပူဖြစ်တဲ့အခါ, သူကအိပ်ဇောပန်ကာရဲ့အောက်ခြေကနေမိတ်ဆက်နှင့်ကုန်ကြမ်း၏မျက်နှာပြင်ပန်းကန်ဖြတ်သန်းနေသည်ကောင်းသောလျော့ပြေနိယာမရှိပါတယ်ရသောအမှုန့်ခြောက်အဘို့အဝတ်စုံကိုဒါအပေါ်ဆေးဝါး, အစားအသောက်, အစာကျွေးခြင်း, ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်အဘို့သင့်လျော်သည် applications ပစ္စည်း။ အခန်းထဲကအလုပ်လုပ်ခုနှစ်, fluidization ၏ပြည်နယ်စိတျလှုပျရှားဖှယျနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောဖိအားမှတဆင့်ဖွဲ့စည်းသည်။ အဆိုပါအစိုဓာတ်အငွေ့ပြန်နှင့်ဖယ်ရှားလျှင်မြန်စွာနှင့်ကုန်ကြမ်းလျင်မြန်စွာအခြောက်လှန်းသည်အရည်အိပ်ရာ၏ 1. အဆိုပါဖွဲ့စည်းပုံမှာ r သည် Features ...
ဒါဟာဆေးပညာ, အစားအစာ, အစာကျွေးခြင်း, ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ဒါပေါ်ကောင်းသောလျော့ပြေသည့်အမှုန့်ခြောက်အဘို့အဝတ်စုံကိုအဘို့သင့်လျော်သည်
လေထုသန့်နှင့်အပူဖြစ်တဲ့အခါ, သူကအိပ်ဇောပန်ကာရဲ့အောက်ခြေကနေမိတ်ဆက်နှင့်ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းမျက်နှာပြင်ပန်းကန်ဖြတ်သန်းနေသည်။ အခန်းထဲကအလုပ်လုပ်ခုနှစ်, fluidization ၏ပြည်နယ်စိတျလှုပျရှားဖှယျနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောဖိအားမှတဆင့်ဖွဲ့စည်းသည်။ အဆိုပါအစိုဓာတ်အငွေ့ပြန်နှင့်ဖယ်ရှားလျှင်မြန်စွာနှင့်ကုန်ကြမ်းလျင်မြန်စွာအခြောက်လှန်းသည်
သေလွန်သောသူတို့သည်ထောင့်ကိုရှောင်ကြဉ်သကဲ့သို့ 1. အရည်အိပ်ရာ၏ဖွဲ့စည်းပုံပတ်ပတ်လည်သည်။
အဆိုပါ Hopper တွေလည်းအတွင်းပိုင်းကုန်ကြမ်း၏ agglomeration နှင့်စီးဆင်းမှု၏တူးမြောင်းဖွဲ့စည်းကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်တစ်ဦးလောကကိုလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားလည်းမရှိ။ (အသေးစားစက် stirrer ထောကျပံ့ပေးမထားဘူး)
2. အဆိုပါ granules ကျော်လှည့်များ၏နည်းလမ်းမှတဆင့်ဆေးရုံကဆင်းသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်, ကလျင်မြန်စွာအလွန်အဆင်ပြေပြေနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့သည်စနစ်ကလိုအပ်ချက်ကဒီဇိုင်းနိုင်ပါသည်။
3. ဒါဟာအနှုတ်လက္ခဏာဖိအားနဲ့တံဆိပျ၏အခွအေနမှာ operated ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါလေကြောင်း filtered ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သန့်ရှင်းရေးအတွက်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအတွက်ရိုးရှင်းပြီးအဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါဟာ GMP များ၏လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသောစံပြပစ္စည်းကိရိယာများဖြစ်ပါတယ်။
4. ခြောက်သွေ့မြန်နှုန်းအစာရှောင်သည်နှင့်အပူချိန်ယူနီဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ခြောက်သွေ့အချိန် 20-30 မိနစ်ဖြစ်ပါတယ်။
input စွမ်းရည် (ကီလိုဂရမ်)
လေထု၏ငွေပမာဏ (m3 / ဇ)
Air ကိုဖိအား (mmH2O)
Power က (KW)
လောကကိုလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားမြန်နှုန်း (rpm ပါ)
ရေနွေးငွေ့စားသုံးမှု (ကီလိုဂရမ် / ဇ)
ယခင်: DWF စီးရီး mesh-ခါးပတ်ခြောက်စက်
နောက်တစ်ခု: KJG စီးရီးဆွန်း Blade ကိုခြောက်စက်
ပေါင်မုန့်အစအန Fluidized အိပ်ရာခြောက်စက်
အရည်အိပ်ရာ Drier Granulating
အရည်အိပ်ရာ granules ခြောက်စက်
granules Powder လျှောက်လွှာအရည်အိပ်ရာခြောက်စက်
Xf စီးရီး Fluidizing ခြောက်စက်
LPG စီးရီး high-speed centrifugal ရေမှုံရေမွှားခြောက်စက်
YZG, FZG စီးရီးဖုန်စုပ်ခြောက်စက်
XF စီးရီး Horizontal အရည်အိပ်ရာခြောက်စက်
KJG စီးရီးဆွန်း Blade ကိုခြောက်စက်